चुट्किला: शेरेलाई वरदान ! - Everest Dainik - News from Nepal
चुट्किला: शेरेलाई वरदान !
अचानक भगवान प्रकट भएछन्, अनि भनेछन् ।
भगवान : तँ के चाहन्छस माग…?
शेरे: एउटा जागिर, ठुलो गाडी र त्यसमा धेरै केटी नै केटी….!
ट्याग्स: chutkila, shere